“Somaliland Maanta Loo Biqi Maayo…. Ninkii Aan Moodayey iyo kii Aan ku waday ba Muuse Waa yahay” | HAYAAN NEWS
“Somaliland Maanta Loo Biqi Maayo…. Ninkii Aan Moodayey iyo kii Aan ku waday ba Muuse Waa yahay”
March 10, 2018 - Written by Mustafe Jannaale
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Alle raalli ha ka ahaado e, dorraad qudbaddiisii run dhab la gu kabay ayey ahayd, dareen ummadeed iyo nuxur qarannimo ayey lahayd, xisaab halyey iyo xeelad siyaasadeed ayey ahayd, xoog dadweyne iyo xarrago dawladnimo ayey ahayd, xafiiltan qarannimo oo xasarad diid ah ayey ahayd ugu danbeyn xog-ogaalnimo xis hadal ah oo xal doon ah ayey ahayd.
Allaa i leh e, ninkii aan moodayey iyo kii aan ku waday ba Muuse waa yahay. Nin og qaranka kan sidii uu ku yimi, wixii dhiig daatay, wixii hanti burburtay, sidii loo jabay, gunnimadii bahdilka ahayd ee la ga soo baxay, xorriyadda maantu sida ay ku timi, jidkii loo soo maray iyo halka maanta la joogo oo in badani mooggan tahay – in dhiig-qubad, naf huris, hayn iyo hanti bixin iyo duur gal la gu keenay.
Allaa i gu og maanta ayey 50,000 oo maati iyo maxas ahaa oo gardarro la gu xasuuqay, 15,000 oo halyey oo halgan nafeed u huray oo u shahiiday, kummaan kun kale oo u naafoobay, boqolaal kun oo hantidood la burburiyey, in kale oo qiyaas la’aaneed oo caddaalad-darro iyo xabsi la gu gabood falay iyo halyeyo qaran oo SNM ahi intoodii shahiidday ay xabaal xajinayaan in kale oo ka badanina ay xorriyaad kifaax neefsanayaan.
Sidoo kale waxa iyana godka ku la’daya odayadii Awdal iyo Sool ee Burco nabadda ku keenay, ee isa saamaxa umadda hormuudka u ahaa. Kuwii dawladnimada keenay ee go’aanka xorriyad la soo noqoshada lahaa oo ay ugu horreeyaan Sheekh Muuse Goodaad, Suldaan Shire iyo Garaad Cabdiqani Garaad Cali.
Waxa la’daya Tuurkii xorreeyey, Maygaagii afkiisa kaga dhawaaqay Jamhuuriyadda iyo Cigaalkii dhisay ee dhaqay. Inta nool ee tacabka aan la qiyaasi karin ku darsatay ee ay hormuudka u yihiin Rayaale, Siilaanyo iyo Xasan Ciise oo kas sare ku siyaasi ah, Sheekh Cali Jawhar oo kitaab ku iimaan qaba iyo kun iyo kaw kale oo feker ku darsaday qarannimada tan hano qaadday iyana niyadda ayey ka xasileen goortii ay arkeen in uu kii naf u huray, duur u galay ee u qaday uu hoggaanka si fiican ugu hayo. Somaliland maanta loo biqi maayo.